पुरानो भन्दा पुरानो पा’यल्सबाट सधैँका लागि मु’क्ति पाउन चाहनुहुन्छ ? यी उपायहरु अपनाउनुहोस् । – Yuwa Aawaj
पुरानो भन्दा पुरानो पा’यल्सबाट सधैँका लागि मु’क्ति पाउन चाहनुहुन्छ ? यी उपायहरु अपनाउनुहोस् ।
बैसाख २३, २०७८ बिहिबार 294
ने’पालमा पा’यल्सबाट पी’डितको संख्या निकै ठूलो छ । तर, गोप्य अंगसँग सम्वन्धित भएकाले धेरैले यो रो’ग लुकाएर पनि बसेका छन् । पा’इल्सको स’मस्या विशेषगरी गर्भावस्था, खानपानमा गडबडी, क’ब्जियत वा दिशा गर्दा बढि जोड लगाउनाले हुने गर्छ ।
पा’यल्सलाई अंग्रेजीमा हेमाराइड पनि भनिन्छ । म’लद्धारमा रहेको भेरिकोज नलीमा द’बाब परेमा पा’यल्स हुने गर्छ । यस्तो दवावले उक्त नली चर्कने, फुट्ने वा त्यसमा चिरा पर्ने गर्छ । जसले गर्दा मल’द्वारमा चरम पि’डा हुन्छ र कतिपयमा अत्यधिक र’क्तश्रा’वसमेत हुन्छ ।
सामान्य व्यक्तिमा पा’इल्सले गम्भीर स’मस्या निम्त्याउदैन तर, र’गत पातलो गर्ने औषधीको सेवन गर्नेहरुमा पा’इल्सले लिभरसिरोसिसको स’मस्या ल्याउँछ । पा’इल्सबाट छुट्कारा पाउने तथा यसलाई बल्झनबाट रोक्ने थुप्रै उपायहरु छन् । यहाँ पा’यल्सको उपचारका केही प्रभा’वकारी विधीहरुको वर्णन गर्दैछौं । पा’यल्सको उ’पचार !
सिट्ज बाथ: पा’यल्सको उपचारमा सिट्ज बाथ प्रभावकारी मानिन्छ । यसमा विरामीको हिप तथा कम्मरमुनिको भागलाई १० देखि १५ मिनेट तातोपानीमा राख्नुपर्छ । यस पद्धतिले तत्काल दु’खाईबाट राहत मिल्छ ।
दैनिक सिट्ज बाथलाई निरन्तरता दिएमा रो’गलाई निर्मुल गर्न सहयोग पुग्छ ।चिसो ट्वाइलेट पेपरको प्रयोग: पा’यल्सका विरामीले ट्वाइलेट पेपर प्रयोग गर्नुभन्दा पानीले धुनु राम्रो हुन्छ । सुख्खा पेपरको प्रयोग गर्दा उनीहरुको मलद्वा\_रमा घा’उ हुन सक्छ । त्यसैले, ट्वाइलेट पेपर प्रयोग गर्नै परेमा चिसो वा गिलो बनाएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । साथै, फोहर वा अल्कोहल लागेको पेपरले पुछ्नु हुँदैन । अन्यथा, मलद्वा’रमा पोल्न सक्छ ।
ट्रपिकल औषधि: पा’यल्सको उपचारमा प्रभा’वकारी मानिने बिभिन्न प्रकारका ट्रपिकल औषधी बजारमा किन्न पाइन्छ । यसमा एन्टी’सेप्टिक क्रिम, ओ’यन्टमेन्ट, मेडिकेटेड वाइप्स आदि पर्छन् । यिनीहरुको प्रयोगले पा’यल्सको दुखाई कम गर्नुका साथै चिलाउन पनि बिसेक हुन्छ । तर, चिकित्सकको सल्लाहबिना एक हप्ताभन्दा बढी औषधि प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
पेन किलर: पा’यल्सका बिरा’मीहरुलाई दि’शा गर्दा चरम पिडा हुन्छ । यस्तो पिडा कम गर्न दुखाई कम गर्ने विभिन्न औ’षधिहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, त्यस्ता औषधिको प्रयोग गर्नुअघि चिकित्सकसित परामर्श गर्नुपर्छ । अन्यथा, बालबालिका र किशोरकिशोरीमा यस्ता औषधी घा’तक बन्न सक्छन् ।बरफको सेकाई: पा’यल्सका विरा’मीहरुका लगि बरफको सेकाई प्रभा’वकारी उपचार हुनसक्छ । यसले र’क्तसञ्चारलाई सुस्त बनाई आराम महसुस गराउँछ । यसको लागि बरफलाई एउटा व्यागमा हालेर करिब दश मिनेट संक्र’मित क्षेत्रमा सेक्नुपर्छ ।
शरीर सफा राख्ने: पा’यल्सको पीडा कम गर्ने अर्को उपाय भनेको सं’क्रमित क्षेत्रलाई सफा एवं स्व’स्थ राख्नु हो । प्रत्येक दिन स्नान गरेपछि मनतातो पानीले म’लद्वार वरिपरिको क्षेत्रलाई सफा गर्नुपर्छ । म’लद्धारको सफाई गर्दा सावुनको प्रयोग गर्न अनिवार्य छैन । यसलाई सावुनले वा सादा पानीले पनि सफा गर्न सकिन्छ । पा’इल्सबाट कसरी जोगिने ?
१) दि’शा गर्दा न’कन्ने: पा’यल्सको जड भनेको क’ब्जियत हो । क’ब्जियत भएमा दिशा गर्दा बल लगाउनुपर्छ । बढि बल लगाउँदा मलद्वारा वरिपरिको नशा फुटेर पा’यल्सको स’मस्या उब्जिन सक्छ । त्यस्तै, पुरानो डायरिया, पाचनसम्बन्धि स’मस्या, बाथरुममा बसेर पढ्ने तथा मोबाइलमा गेम खेल्ने बानीले पनि पा’यल्स हुने गर्छ । त्यसैले, दिशा गर्दा कहिल्यै पनि बल लगाउनु हुँदैन । त्यस्तै, बाथरुममा धेरै बेर बस्नु हुँदैन । ट्वाइलेट सिटमा बस्दा खुट्टालाई थोरै माथि उठाएर दिशा गर्न सजिलो बनाउनु पर्छ । कहिल्यै दि’शा रोकेर बस्नु हुँदैन । आउनासाथ ट्वा’इलेट कुदिहाल्नु पर्छ । समयमा ट्वाइलेट नगए वा धेरैबेर रोके क’ब्जियत हुनसक्छ ।
२) सही खानपान: सही खानपानबाट पनि पा’यल्सलाई रोक्न सकिन्छ । यसका लागि सन्तुलित आहारका साथमा पेय पदार्थबाट टाढै रहनुपर्छ । सन्तुलित आहारका लागि फलफुल, सागसब्जी, अन्न, पास्ता, गेडागुडी लगायतका फाइबरयुक्त खानेकुराको सेवन गर्नुपर्छ । पर्या¥प्त मात्रामा पानीको सेवन गर्नुपर्दछ। कफीन तथा मदिराबाट टाढा रहनु पर्छ, किनकी यसले आ’न्द्राको गतिविधि (बाउल मुभमेन्ट) लाई प्रभावित पार्न सक्छ ।
३) नियमित ब्यायाम: नियमित व्यायाम यसै पनि स्वा’स्थइको लागि अति आवश्यक छ । यसले तौललाई नियन्त्रित गर्न सहयोग पुग्छ। आवश्यकताभन्दा बढी तौल भएमा यसले मलद्धारको नलीमा अतिरिक्त दवाव पैदा गर्न सक्छ । पा’यल्स पैदा हुने सबैभन्दा ठूलो कारण यही हो । त्यस्तै, शारीरिक सक्रियताले पनि क’ब्जियत रोक्न सहयोग गर्छ । यसबाहेक विभिन्न वैकल्पिक उपचार पद्ध’तिद्वारा पनि पा’यल्सको उपचार गर्न सकिन्छ ।
कतिबेला चिकित्सक भेट्ने ? सामान्यतया, पा’यल्सले ठूलो हानी पुर्‍याउँदैन र, सुरुको अवस्थामा यसको उपचार पनि सजिलो हुन्छ । तर, पनि केही व्यक्तिमा भने यसले जटिल स’मस्या निम्त्याउने गर्छ । विशेषगरी, पा’यल्सका कारण अत्यधिक पिडा भएमा तुरुन्तै चिकि’त्सकलाई देखाउनु पर्छ । पा’यल्सका कारण लामो समय र’क्तश्राव भएमा र’क्तअल्पता हुने गर्छ । रक्तअल्पता भएमा शरीरका कोषिकामा अक्सिजन राम्ररी पुग्दैन, जसका कारण व्यक्तिलाई कमजोरी तथा थकान महसुस हुने गर्छ ।
शल्य’क्रियारहित उपचार: पा’यल्सको अन्तिम उपचार भनेको शल्य’क्रिया नै हो । तर, सुरुको अवस्थामा शल्यक्रियाबिना पनि यसको प्र’भावकारी र सुरक्षित उपचार गर्न सकिन्छ । स-साना रबर व्याण्डको प्रयोग गरेर, स्केलेरोथेरापी इन्जेक्सन दिएर तथा लेजर थेरापी’द्वारा पनि पा’यल्स रोगको उपचार गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि चिकित्सकलाई देखाउन जरुरी छ ।
कुन अवस्थामा शल्यक्रिया गर्ने ? केही जटिल अवस्थाहरुमा श’ल्यक्रियाविना पा’यल्सको उपचार सम्भव हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा चिकित्सकहरु पायल्स निकाल्न शल्यक्रियाकै सल्लाह दिन्छन् । यस्ता श’ल्यक्रिया रोगको प्रकृति र रो’गको गम्भीरता तथा उपचार पद्धति अनुसार फरक हुन्छन् । अस्पताल भर्ना भएर वा नभई पनि शल्यक्रिया गर्न सकिन्छ। शल्यक्रिया गर्दा कहिलेकाहीँ र’क्तश्राव, संक्रमण पनि हुन सक्छन् ।
सुझाव: –दु’खाई कम गर्ने विभिन्न औषधिको प्रयोगले क’ब्जियतको स’मस्या पैदा हुन सक्छ त्यसले पा’यल्स निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले, यस्ता औषधधि सेवन गर्नुअघि अगाडि दिशा नरम बनाउने औषधीको प्रयोग गर्नु जरुरी छ । –गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा धेरैलाई पा’यल्स हुनसक्छ। त्यसैले, ग’र्भावस्थामा चिकित्सकको सल्लाहविना कुनै औषधी खानु हुन्न । अन्यथा, यसले स्वा’स्थ्यमा प्रतिकल प्रभाव पार्न सक्छ ।
ध्यान दिनु पर्ने कुरा: –पा’यल्समा प्रयोग गरिने क्रिमप्रति केही व्यक्ति संवेदनशील हुन सक्छन् । त्यसको लागि कुनै पनि क्रिम प्रयोग गर्नु पूर्व सावधानी अपनाउनु पर्छ । –पा’इल्सका कारण दिशामा र’गत देखिनसक्छ । त्यसबाहेक, आन्द्राको क्या’न्सर लगायत ग’म्भीर स’मस्यामा पनि दिशामा रगत देखिने हुँदा तुरुन्तै चिकित्सकलाई जचाँउनु पर्छ । –कुनै औषधीले एलर्जी भएमा चि’कित्सकसित सम्पर्क गरी नयाँ उपचार पद्धतिको थालनी गर्नु पर्छ । –पा’इल्सका कारण अत्याधिक दुखाईका कारण मलत्याग गर्न स’मस्या भएमा तुरुन्तै चिकित्सकलाई जचाउँनु पर्छ ।
Prevप्राकृतिक रुपमा नै अक्सिजन बढाउन के गर्ने ?
Nextबिहानै खाली पेट पानी पिउनुका पाँच महत्वपूर्ण फाइदाहरु ।
सुकेको मरिचमा लुकेको चमत्कारी फाईदा-फाइदा थाहा पाउनुहोस ।
खाडीका नेपाली भन्छन् : हामीलाई लिन जहाज पठाउ ।
उपत्यकामा जेठ ३१ पछि पनि निषे’धाज्ञा थपिने ।
खुशीको खबर : नेपालमा आज ह्वात्तै घटे को’रोना संक्र-मित ।(संख्या सहित) (5160)
३. असारदेखि के-के खुल्छ, के खुल्दैन ? यस्ताे छ सरकारकाे तयारी ! (2156)
७. के मास्क धोएर लाउन मिल्छ ? दिनदिनै फेर्नुपर्छ कि एउटै लगाइरहे हुन्छ ? तपाई पनि थाहा पाउनुहोस । (1091)
८. माउन्ट भ्यू इंगलिस स्कूलका सस्थापक प्रिन्सिपल राजकुमार महर्जनको नि’धन ! (1065)